Ọrụ China na-arụ ọrụ igwe, Led Pole Light Fixtures, Led Work Light Supplier
Nkọwa:Ebube Ọrụ Ọrụ,Ejiri Ibu Uhie ,Na-arụ ọrụ ìhè,Okpokoro Oru Ugbo,,
Home > Ngwaahịa > Ibu Ọrụ > Umu Obu Obu Uhie
Ngwaahịa nke Umu Obu Obu Uhie , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ebube Ọrụ Ọrụ , Ejiri Ibu Uhie suppliers / factory, wholesale high-quality products of Na-arụ ọrụ ìhè R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
130lm / w 5000K 80W na-eduzi bọlbụ ọka  Kpọtụrụ ugbu a
80W Ebube Ọrụ Ọrụ Ihie  Kpọtụrụ ugbu a
120W Led Temporary Work Light 15600Lumen  Kpọtụrụ ugbu a
10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
80W Ọhụụ na-arụ ọrụ nwa oge 10400Lm  Kpọtụrụ ugbu a
Elu Bay na-arụ ọrụ nwa oge ọkụ 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Hook Wụnye N'ihi na 150W arụ ọrụ ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ogologo oge arụ ọrụ na-arụ ọrụ 150W  Kpọtụrụ ugbu a
150W Ọhụụ na-adịru nwa oge na-enye ìhè  Kpọtụrụ ugbu a
150W Egwuregwu Dịrị Dịrị Ọhụụ Ọrụ Light Fit  Kpọtụrụ ugbu a
100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye  Kpọtụrụ ugbu a
100W Nwa Oge Ihie Ọrụ Ìhè 13000Lm 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
100W mere ka ìhè rụọ ọrụ nwa oge  Kpọtụrụ ugbu a
150W Oghere Garage n'èzí n'èzí Ọrụ 240 volt  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu 120W n'èzí rụọ ọrụ 110v  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe 80 Wt na-arụ ọrụ ọrụ 120v  Kpọtụrụ ugbu a
130lm / w 5000K 80W na-eduzi bọlbụ ọka <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a 80W na-ebute ọkụ ọkụ ọrụ na-adị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha...
80W Ebube Ọrụ Ọrụ Ihie <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a 80W na-ebute ọkụ ọkụ ọrụ na-adị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na...
120W Led Temporary Work Light 15600Lumen <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ọrụ ọkụ ọkụ ọrụ dị ngwa na mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye...
10400LM 5000K 80W Led Work Light Fixtures <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Akpọrọgwụ > : Nke a na- arụ ọrụ ọkụ ọkụ 80W bụ ngwa ngwa ma dị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha...
80W Ọhụụ na-arụ ọrụ nwa oge 10400Lm <Ọdịdị Echeghị Agbanwe Agbanwe > : Nke a mere ka ìhè ọrụ 80W dị ngwa ma dị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị na...
Elu Bay na-arụ ọrụ nwa oge ọkụ 150W <Ọdịdị Ekebeghi Agbanwe Agbanwe > : Nke a mere ka ìhè ọrụ 150W dị ngwa ma dịrị mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye agbatị...
Hook Wụnye N'ihi na 150W arụ ọrụ ọkụ ọkụ Mmiri a dị elu na-eduba ìhè ọrụ bụ ngwụcha zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Egwuregwu ọrụ ọrụ 150W anyị nwere ike ijikọta ya na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara...
Ogologo oge arụ ọrụ na-arụ ọrụ 150W Mmiri a dị elu na-eduba ìhè ọrụ bụ ngwụcha zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Egwuregwu ọrụ ọrụ 150W anyị nwere ike ijikọta ya na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na...
150W Ọhụụ na-adịru nwa oge na-enye ìhè Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike...
150W Egwuregwu Dịrị Dịrị Ọkụ Oge Ọhụụ Na-enwu ọkụ Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye...
100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na...
100W Nwa Oge Ihie Ọrụ Ìhè 13000Lm 5000K Nke a 100W Led Work Lights bụ ihe zuru oke na-agbanwe maka 300W ọkụ ọkụ, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike...
Nke a 100W Led String Work String bụ kpam kpam na-anọchi 300W ọkụ ọkụ, na-echekwa ruo 80% na gị ọkụ eletrik. Ogologo oge anyị na- arụ ọrụ na-ejikọta ngwa ngwa site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ...
Ọnụahịa otu: USD 62 - 66 / Piece/Pieces
Bbier 150W Na-arụ ọrụ n'èzí Ọrụ bụ 130lm / w, 19500 Lumens na 5000k Ìhè na-acha, ETL DLC Nchịkọta ebe Damp. Nke a 150W Na-echekwa Ọrụ Ụlọ Ọrụ bụ 6 00W HID Replacement, 120-277V, Omume ọma jijiji, ujo, na mmetụta na-eguzogide ọgwụ. Anyị nwere ike...
Egwuregwu 120W n'èzí rụọ ọrụ 110v
Ọnụahịa otu: USD 56 - 60 / Piece/Pieces
Ejiri Akwukwo oru anyi 110v iji kpoo ihe omuma nke ndi ulo oru eji mma nke obere ọrụ rụọ ọrụ . Nke a Egwuregwu n'èzí bụ 130lm / Watt, ngosipụta ngosipụta lumen bụ 15600 lumens iji kwado ụlọ ọrụ na ọkụ ọkụ azụmahịa. Mgbanwe zuru oke maka mgbidi...
Ihe 80 Wt na-arụ ọrụ ọrụ 120v
Ọnụahịa otu: USD 48 - 50 / Piece/Pieces
Ọhụụ Ọrụ Ọhụụ ọhụrụ Led bụ ezigbo maka ebe ndị na-ewu ụlọ, ụlọ ahịa na-arụ ọrụ, ọrụ na garages. Anyị W ork Ìhè Portable dị arọ ma na-enye ọhụụ mfe, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ike ịkwaga n'ebe saịtị ọrụ na-agagharị mgbe eji ya. Okirikiri ihu...
China Umu Obu Obu Uhie Ngwa
Egwuregwu Ọrụ Ebube Ọhụụ na- enyepụta ìhè ọkụ karịa ndọtị ndị ọzọ nke LED maka ebe nrụọrụ weebụ dị nchebe. Ọrụ igwe na-arụ ọrụ na China dị mfe nwụnye, dị nnọọ nkwụnye na eriri na ị dị njikere ịga. 80 watt, 100 watt, 120 watt na 150 watt dị maka Led Portable Work Lam p . Mee ka ọkụ na-egbukepụ egbukepụ ọkụ na obere okpomọkụ na ngwa gị na ịrụ ọrụ nke 120 Lm / watt na 120 ° nke na-enye otu ọnụọgụ ọkụ. Mee ka oghere ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ebe ọrụ gị na-acha ọkụ ọkụ .
Ebube Ọrụ Ọrụ Ejiri Ibu Uhie Na-arụ ọrụ ìhè Okpokoro Oru Ugbo Ebube Ọrụ Ọrụ Dị